Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » दशैंको टीका : कुन देशमा कति बजे शुभ-साइत ?
दशैंको टीका : कुन देशमा कति बजे शुभ-साइत ?
काठमाडौं, असोज २२ । अन्तराष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले नेपाल बाहिरको लागि पनि दशैंको टीका लगाउने उत्तम साइत तयार पारेको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले २४ वटा देशमा टीका लगाउने सही समय तय गरेको समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. माधवप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।